Yangu iPhone Inoti 'Iyi Yekuwedzera Inogona Kusave Inotsigirwa.' Heino Kugadzirisa! - Iphone
iphone yangu haitumire mameseji
batidza imessage iphone 5
iphone kufona inonanga ku voicemail
yangu ipad skrini yakasviba uye haina kuchinja
isina kukodzera sim iphone 6 verizon
IPhone Yangu Inoti 'Ichi Chishongedzo Chingave Chisingatsigirwe.' Heino Kugadzirisa!
Iwe wakaisa mu iPhone yako kuti uibhadhare, asi chimwe chinhu chisiri kushanda nemazvo. Iyo yakamira kuchaja uye inonakidza pop-up inoonekwa pachiratidziri - yako iPhone inoti 'Izvi zvinowedzera hazvigone kutsigirwa. 'Munyaya ino, ini ndichatsanangura kuti sei uri kuona iyi meseji pane yako iPhone uye ndikuratidze zvaunogona kuita kugadzirisa dambudziko.
iphone haigoni kuwana fitbit
Sei IPhone Yangu Ichiti 'Ichi Chishongedzo Chingave Chisingatsigirwe'?
Yako iPhone inoti 'Chishongedzo ichi hachigone kutsigirwa' nekuti chimwe chinhu chakakanganisika pawaiedza kubaya chishongedzo mune yako iPhone's Mheni chiteshi. Zvinhu zvakasiyana siyana zvinogona kunge zvichikonzera dambudziko.
Chishongedzo chako hachisi MFi-yakasimbiswa.
Yako iPhone's software haina kushanda.
Chishongedzo chako chakasviba, chakakuvadzwa, kana chakatyoka chose.
Yako iPhone Mheni chiteshi yakasviba, yakakuvadzwa, kana yakaputswa zvachose.
Chaja yako yakasviba, yakakuvadzwa, kana yakaputswa zvachose.
Matanho ari pazasi achakubatsira kuongorora uye kugadzirisa chaicho chikonzero nei yako iPhone ichiti 'Izvi zvinowedzera zvinogona kusatsigirwa.'
Edza Kubatanidza Iyo Chigadzirwa Zvakare
Chinhu chekutanga kuita kana yako iPhone ikati 'Ichi chishongedzo chingasatsigirwe' kuyedza kubatanidza zvakare. Tinya iyo Dzinga bhatani uye dhonza chako chinowanikwa kubva kune yako iPhone's Mheni chiteshi. Chivharirire zvakare mukati kuti uone kana imwechete pop-up ichioneka.
Iko Yako Yekuwedzera MFi-Yakasimbiswa?
Kazhinji yenguva, iyo 'chishongedzo ichi hachigone kutsigirwa' pop-up inoonekwa nguva pfupi mushure mekunge iwe wavhara yako iPhone mune sosi sosi yekuchaja. Muzviitiko zvakawanda, tambo yekuchaja iwe yauri kuyedza kubhadharisa yako iPhone haina MFi-yakasimbiswa, zvichireva kuti haina kugadzirwa inoenderana neApple dhizaini dhizaini.
Tambo dzekuchaja dzaunogona kutenga kunzvimbo yako yemagetsi kana chitoro chemadhora dzinenge dzisingambove dzakasimbiswa MFi nekuti dzakagadzirwa zvakachipa. Mune zvimwe zviitiko, tambo idzi dzinogona kukonzeresa kukuvara kukuru kune yako iPhone ne kuchipisa .
Kana zvichibvira, kuchaja yako iPhone netambo iyo yaakauya nayo. Kana iyo tambo yekuchaja iyo yako iPhone yawakauya nayo isiri kushanda, unogona kuchinjana neimwe nyowani kune yako Apple Store, chero bedzi yako iPhone yakafukidzwa neAppleCare chirongwa.
IPhone yako inogona kunge ichiti 'Ichi chishongedzo hachigone kutsigirwa' nekuda kwediki software glitch. Paunovhara chinowanikwa muChiedza chengarava ye iPhone yako, yako iPhone's software inosarudza kuti ungabatanidze kana kwete.
Edza kutangazve yako iPhone, iyo inogona dzimwe nguva kugadzirisa madiki software matambudziko. Kana uine iPhone 8 kana pakutanga, Dhinda uye ubatisise bhatani remagetsi , wobva wasvaira simba icon kubva kuruboshwe kuenda kurudyi pane chinoratidzwa. Maitiro acho akafanana neiyo iPhone X, XS, uye XR, kunze kwako tinya uye ubatise Rutivi bhatani uye chero vhoriyamu bhatani kusvikira slide kumagetsi kudzima rinoratidzika.
Mirira 15-30 masekonzi, wobva wadzosera yako iPhone kumashure nekudzvanya uye kubata bhatani remagetsi (iPhone 8 uye kumberi) kana iyo Rutivi bhatani (iPhone X uye nyowani). Kamwe kana yako iPhone yadzokera kumashure, edza kubatanidza kune chako chishongedzo zvakare.
Kana ichishanda, saka software glitch yaikonzera dambudziko! Kana iwe uchiri kuona iyo pop-up pane yako iPhone, enda padanho rinotevera.
Wongorora Chishongedzo Chako
Iye zvino zvawakabvisa mukana wechaji yekuchaja isiri MFi-yakasimbiswa uye diki software software, inguva yekuongorora zvinowedzerwa. Kazhinji yenguva, chishongedzo chauri kuedza kushandisa paunoona 'Izvi zvinowedzera hazvigone kutsigirwa.' pop-up tambo yekuchaja.
Nekudaro, chero chishandiso kana chishongedzo chinobaya mu iPhone yako Mheni chiteshi zvinogona kukonzera yambiro kuoneka. Nyatso tarisa kumagumo ekubatanidza Mheni (chikamu cheshongedzo icho chinobaya muiyo yako iPhone's Mheni chiteshi) cheyakashongedzwa yauri kuedza kushandisa.
Iko kune chero kusanzwisisika kana kukanganisa? Kana zvirizvo, zvishongedzo zvako zvinogona kunge zvichinetsa kubatanidza kune yako iPhone. Izvi ndizvo zvakaitika kwandiri munguva pfupi yapfuura, sezvo kumwe kukuvara kwetambo yangu yekuchaja kwakaita kuti yangu iPhone igamuchire 'Izvi zvinowoneka zvinogona kusatsigirwa.' pop-up, kunyangwe ini ndakawana tambo kubva kuApple.
Kujekesa kumvura kunogona zvakare kukuvadza iyo Mheni yekubatanidza yeako zvishongedzo, saka kana iwe uchangobva kudurura chinwiwa pane chako chishongedzo, izvo zvinogona kuve chikonzero nei zvisiri kushanda.
Kana yako tambo yekuchaja iri chishongedzo chiri kukonzera dambudziko, zvakare nyatso tarisa kumagumo eUSB. Iko kune chero tsvina, chinhu, kana zvimwe marara zvakanamirwa mune USB magumo? Kana zvirizvo, zvichenese uchishandisa bhurasho rinorwisa static kana bhurasho remazino risina kushandiswa. Kana iwe usiri yako anti-static brashi, unogona kuwana yakakura matanhatu-pack paAmazon.
Tora Kutarisa Mukati Mako Mheni Chiteshi
Kana chishongedzo chiri muchimiro chakadzikama, tarisa mukati meMheni chiteshi pane yako iPhone. Chero ginhi, tsvina, kana marara anogona kudzivirira yako iPhone kubva pakugadzira yakachena kubatana kune chako chishongedzo. Kana chiziviso 'Ichi chisingakwanise kutsigirwa' chakanamirwa pachiratidziri kana kusazodzinga, izvi zvinowanzova dambudziko.
Bata tochi uye nyatso tarisa mukati meiyo iPhone's Mheni chiteshi. Kana iwe ukaona chero chinhu chisiri chemukati meMheni chiteshi, edza kuchichenesa kunze.
Ini Ndinosuka Sei Yangu iPhone Yekuchaja Port?
Tora iyo anti-kunofambira mberi bhurasho kana bhurasho idzva remazino uye bvisa chero chii chiri kuvhara yako iPhone's Mheni chiteshi. Unogona kushamisika kuti yakawanda sei inobuda!
Paunenge uchinge wachenesa kunze, edza kubaya chishongedzo chako zvakare. Enda padanho rinotevera kana yako iPhone ichiri kuti 'Izvi zvinogona kunge zvisina kutsigirwa.'
Wongorora Yako iPhone's Chaja
Kana yako iPhone ikati 'Izvi zvinowedzera kusatsigirwa' paunoyedza kuchaja, panogona zvakare kuve nenyaya nechaja yako ye iPhone, kwete iyo Mheni tambo. Nyatso tarisa mukati me USB chiteshi pane yako iPhone's chaja. Kufanana nedanho rapfuura, shandisa anti-static brashi kana bhurocha nyowani nyowani kuchenesa chero gunk, lint, kana imwe tsvina.
Ita shuwa kuti iwe zvakare edza kubhadharisa yako iPhone nematareji akasiyana akasiyana. Kana iPhone wako chete ane kuchaja nyaya imwe mundiro, ipapo zvingangoita kuti mundiro yako ari kukonzera dambudziko.
Kana iwe uchiramba uchiona iyo 'chishongedzo chingasatsigirwe' pop-up zvisinei kuti ndeipi charger yaunoshandisa, saka yako charger haisi iyo dambudziko.
Zvimwe zvishongedzo (kunyanya izvo zvakagadzirwa neApple) zvinoda imwe vhezheni yeIOS kuti iiswe pane yako iPhone vasati vagona kubatana. Enda ku Zvirongwa -> General -> Software Kwidziridzo uye tapira Dhawunirodha uye gadza kana software yekugadzirisa iripo. Tarisa uone chinyorwa chedu kana uine dambudziko kunatsiridza yako iPhone .
Usati waisa iyo yekuvandudza, ita shuwa kuti yako iPhone iri kuchaja kana ine ingangoita 50% bhatiri hupenyu. Kana kuisirwa kwatanga, yako iPhone ichadzima uye bhaja yemamiriro ichaonekwa pachiratidziro. Kana bhawa razara, iyo yekuvandudza yapera uye yako iPhone ichadzokera kumashure nguva pfupi yapfuura.
Ita DFU Kudzorera Pane Yako iPhone
Kunyangwe zvisingaite, pane mukana mudiki dambudziko rakadzama re software riri kukonzera yako iPhone kuti iti 'Ichi chishongedzo chinogona kusatsigirwa.' Nokuita munhu DFU kudzorera, tinogona kubvisa ichi chakadzika Software dambudziko nokudzima zvachose kubva iPhone wako.
Bhaibheri rinotii pamusoro pekudya zvine utano
Paunoita DFU kudzoreredza, yese kodhi pane yako iPhone inozobviswa uye kuiswazve kudzosera ku iPhone yako. Kuti uwane kufamba kwakazara, tarisa edu nhungamiro pakuita DFU kudzorera pane yako iPhone !
Kana yako iPhone ichiri kuti 'Ichi chishongedzo chinogona kusatsigirwa' mushure mekunge iwe watevera ese matanho ari pamusoro, ungangoda kuti chako chinowedzerwa chinotsiviwa kana iPhone kugadziridzwa. Sezvandambotaura pakutanga mune ino chinyorwa, unogona kuwana yekuchaja tambo uye madzirojaja yakauya neako iPhone yakatsiviwa kana yako iPhone yakafukidzwa neAppleCare.
Izvo zvakare zvinoita kuti yako iPhone Mheni chiteshi iputsike kana kukuvara uye inofanirwa kugadziriswa. Kana yako iPhone yakafukidzwa neAppleCare, ronga musangano kuApple Chitoro padyo newe uye uve nehunyanzvi tarisa pazviri. Isu tinokurudzirawo an on-kudiwa yekugadzirisa sevhisi inonzi Puls , iyo inotumira tekinoroji yakasimbiswa kwauri iyo ichagadzirisa yako iPhone ipapo ipapo.
Tiri Pano Kana Uchida Kutsigirwa
Chishongedzo chako chiri kushanda uye yako iPhone iri kushanda zvakajairika zvakare. Iwe unenge waziva chaicho chekuita inotevera nguva iyo yako iPhone inoti 'Izvi zvinowedzera hazvigone kutsigirwa.' Inzwa wakasununguka kusiya chero mimwe mibvunzo muchikamu chemashoko pazasi!